'वर्ल्डलिंक'माथि गुनासै गुनासा, इन्टेरनेट स्पीडमा धोका ! - नेपालबहस
‘वर्ल्डलिंक’माथि गुनासै गुनासा, इन्टेरनेट स्पीडमा धोका !
| २१:३३:४४ मा प्रकाशित
२१ भदौ, काठमाडौं । छिटो भनेकै ‘वर्ल्डलिंक’ भनेर नारा बोकेको इन्टरनेट प्रदायक कम्पनीविरुद्ध अहिले धेरैको गुनासो बढ्दो छ । बेला बेला निकै स्लो हुने इन्टरनेट सेवा कहिलेकाँही ठप्प हुने समस्या पनि छ ।
यही समस्या झेलिरहेका पत्रकार गजेन्द्र बुढाथोकीले ट्वीटरमा लेखेका छन, ‘४५ एमबीपीएसको इन्टरनेट दिन्छु भनेको वर्ल्डलिंकले २५ एमबीपीएस मात्रै दिएको रहेछ । यसरी उपभोक्तामाथि लुट मच्चाउने वर्ल्डलिंकविरुद्ध कहाँ उजुरी गर्ने ?’
अर्का पत्रकार सरोज पौडेलले फेसबुकमा वर्ल्डलिंकलाई पत्र नै लेखेका छन् । वर्ल्डलिंक कम्युनिकेशन कम्पनीलाई लेखेको पत्रमा इन्टरनेटको स्पीड घटाई सहयोग गरिदिन भन्दै आफ्नो समस्या दर्शाएका छन्, ‘अस्ति भर्खर २६ हजार बुझाएर आएको इन्टरनेटको स्पीड बढी भएर हो कि किन हो ? चलाउनै सकिएन । कृपया थोरै घटाई दिन हुन अनुरोध छ । यस्तो फास्ट इन्टरनेट चलाउने बानी छैन ।’
अनामनगरमा बस्ने पत्रकार कुसुम विश्वकर्माको समस्या पनि उस्तै छ । नेपालबहस डटकम अनलाईनमा काम गर्ने उनी जहिले समाचार पोस्ट गर्दा वर्ल्डलिंक कार्यालयमा फोन गर्नुपर्ने बाध्यताबाट गुज्रिरहेकी छिन् । ‘ल्यापटप खोलेर समाचार पोस्ट गर्न खोज्दा ब्राउजर घुमेको घुम्यै गर्छ’ उनले भनिन्, ‘ल्यापटप खोलेपछि प्राय वर्ल्डलिंकलाई फोन गर्नैपर्ने हुन्छ । तर समस्या कहिल्यै समाधान भएन ।’
यी त केही प्रतिनिधिमूलक समस्या र गुनासा मात्रै हुन् । नेपालको नम्बर एक इन्टरनेट प्रदायक कम्पनी दाबी गर्ने वर्ल्डलिंकमा अहिले दर्जनौ समस्या देखिन थालेका छन् ।
पहिले यही समस्याबाट गुज्रिएका सुविसु, क्लासिक, ब्रोडलिंक प्रयोगकर्ता अहिले वर्ल्डलिंकको नेट जोड्न थालेपनि पुरानै समस्याबाट ग्रसित छन् । त्यसमाथि समस्या नसुन्ने, फोन गर्दा नउठाउने, फोन उठाएपनि समस्यालाई गम्भिर रुपमा नलिने समस्या उस्तै छ ।
यसले गर्दा वर्ल्डलिंकका लाखौ प्रयोगकर्ता मर्कामा छन् । तर वर्ल्डलिंकले यी समस्यालाई बेवास्ता गर्दै आएको छ ।
विज्ञापन छर्दै, उपभोक्ता ठग्दै !
नेपालमा १८ लाख प्रयोगकर्ता रहेको वर्ल्डलिंकले नाफाको केही हिस्सा विज्ञापनमा खर्चिरहेको छ । वर्ल्डलिंककै शब्दमा साढे ४ लाख ‘रजिष्टर्ड’ प्रयोगकर्ता रहेको वर्ल्डलिंकले मूलधारका सबैजसो मिडियामा विज्ञापन छ्याप्छ्याप्ती बनाएको छ । छिटो भनेकै ‘वर्ल्डलिंक’ स्लोगान दिएर बजार विस्तार गरेको वर्ल्डलिंकको सेवा भनेजस्तो समस्यारहित र सबैभन्दा छिटो इन्टरनेट भने छैन् ।
नाम चलेका अनलाईनमा हप्तैपिच्छे विज्ञापन दिने वर्ल्डलिंक त्यही आकर्षण र विज्ञापनकै सुरमा लुट्न पनि अभ्यस्त छ । विज्ञापनमार्फत बजारमा एकछत्र गुणस्तरीय इन्टरनेट सेवाको भ्रम छरेर वर्ल्डलिंकले उपभोक्ता ठगी गरेको आरोप छ ।
‘सबैतिर विज्ञापन छ । छिटो भनेकै वर्ल्डलिंक भन्ने चर्चा छ । राम्रै होला भनेर वर्ल्डलिंक जोडियो’ एक प्रयोगकर्ता भन्छन, ‘तर विज्ञापनमा भनेजस्तो र सोचेजस्तो वर्ल्डलिंकको नेट फास्ट छैन ।’
यो मात्रै होइन, वर्ल्डलिंकले साच्चै ठगी नै गर्छ । ग्राहकलाई ५० एमबीपीएस स्पीड दिने वर्ल्डलिंकले २५ प्रतिशत मात्रै सेवा दिन्छ । पैसा ५० एमबीपीएसकै लिने तर सेवा चाँही २५ एमबीपीएस मात्रै दिने वर्ल्डलिंकको असली धन्दा हो ।
त्यति मात्रै होइन, २० देखि २५ एमबीपीएस स्पीड दिने भनेर मासिक पैसा लिने वर्ल्डलिंक सेवा भने १० एमबीपीएसको मात्रै दिने समस्या उस्तै छ । स्पीडमा ठूलो धोका दिइरहेको वर्ल्डलिंकको ‘रेस्पोन्स रेट’ पनि निकै सुस्त छ ।
पहिले पहिले हरेक गतिविधिको अपडेट गराउने वल्र्डलिंक अहिले भने ग्राहकको गुनासो सुन्नै छाडेको छ । मुश्किलले घण्टौ लगाएर गुनासो सुनाएपनि त्यसको सम्बोधन भने हुदैन ।
टिकटक र जुम एपलाई दोष !
ग्राहकको समस्या बेवास्ता गर्दै आफ्नै धुनमा अघि बढिरहेको वर्ल्डलिंकले अहिले इन्टरनेट स्लो हुनुलाई टिकटक र जुम एपलाई दोष थोपर्न बाध्य छ । यो दोष वर्ल्डलिंकले मात्रै होइन, सुविसु, क्लासिक, ब्रोडलिंकदेखि भायानेटसम्मले समेत देखाईरहेका छन् ।
केही हदसम्म टिकटक र जुमको बढ्दो प्रयोगले इन्टेरनेटको खपत बढ्दो छ । सर्वरलाई समस्यामा पार्ने यी दुई एपको लोकप्रियता र प्रयोग बढ्नुमा कोरोना भाइरसले निम्त्याएको लकडाउन र निषेधाज्ञा मुख्य कारण हुन् । दिनभर घरमै बसेर फुर्सदिला भएका मानिसहरु बैठक तथा रमाइलो गर्न जुम र टिकटकको प्रयोग गरिरहेका छन् । यसैका कारण हिजोआज इन्टरनेट निकै धिमा भएको तर्क वल्र्डलिकंकको छ ।
‘कतिपय प्राविधिक कारण नेट स्पीड स्लो हुन्छ । तर अहिले जुम र टिकटकले गर्दा नेट स्लो भएको हो’ वर्ल्डलिंकका एक कर्मचारीले नेपालबहससँग भने, ‘जानी जानी नेट स्पीड स्लो गराइएको होइन । कतिपय समयमा सर्वरमै समस्या रहेका बेला पनि कम एमबीपीएस देखाउँछ ।’ एउटै राउटरबाट धेरैले नेट प्रयोग गर्दा, सर्वरमा समस्या सिर्जना भएका बेला, पीक आवरमा नेट धेरै चल्नेबेला इन्टरनेट धिमा चल्ने वर्ल्डलिंकको दाबी छ ।
तर प्राविधिक रुपमै योजना बनाएर उपभोक्तामाथि ठगी गर्न उद्धत रहेपनि वर्ल्डलिंक यो गल्ती स्वीकार गर्न चाहन्न । प्राविधिक समस्यालाई दोष देखाएर वर्ल्डलिंक उम्किदै आएको छ ।
कारवाही गर्ने तयारी !
इन्टरनेट प्रदायक कम्पनीको ठगीबारे हेर्ने आधिकारिक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण हो । प्राधिकरणले नै इन्टरनेट प्रदायक कम्पनीलाई अनुमति दिनेदेखि सेवा रोक्नेसम्मको अधिकार राख्दछ ।
पछिल्लो समय इन्टरनेट स्पीड स्लो भएको गुनासो प्राधिकरणसम्म पुग्ने गरेको छ । वर्ल्डलिंकले पनि धेरै दुःख दिने गरेको गुनासो प्राधिकरणसम्म पुगेको छ । आएका गुनासो सम्बोधन गर्ने क्रममा वर्ल्डलिंकलाई सचेत गराइएको प्राधिकरणका निर्देशक मीनप्रसाद अर्याल बताउँछन् ।
नेपालबहस डटकमसँग कुरा गर्दै निर्देशक अर्याल भन्छन् ‘गुनासा र समस्या आएका छन् । खासगरी इन्टेरनेट स्पीड स्लो भएको कम एमबीपीएस दिएको भनेर हामीले ती गुनासो सुनेका छौ । उजुरी पनि आउने गरेका छन’ उनले भने, ‘गुनासोको सम्बोधन गर्दै हामीले सचेत गराएका छौ ।’ अहिलेसम्म कारवाही नगरेपनि पटक पटक उपभोक्ताले गुनासो गरेकाले अब नयाँ प्रविधिबाट निगरानी र नियमन गर्ने योजना अघि सारिएको अर्यालले बताए ।
‘अब हामी इन्टरनेट सेवा प्रदायक र ग्राहकलाई नै जोडेर एउटा प्रविधि विकास गर्दैछौ । जसबाट दुवैको काम तत्कालै हेरेर समस्याको समाधान हुनेछ । अनि ठगी गर्ने, बढी पैसा लिनेमाथि तत्कालै कारबाही हुनेछ । केही समयपछि प्रविधि सार्वजनिक भएमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकको ठगी रोकिनेछ । अब गुनासो धेरै आएकाले कारवाही गर्ने तयारी पनि गरेका छौ ।’ उनले भनेका छन् ।
प्रदेश २ सरकारले माग्यो ३० जना उपसचिव वा सो सरहका अधिकृत १ हप्ता पहिले
भूकम्प प्रभावित जिल्लामा इन्टरनेट क्षमता अभिवृद्धि गरिने ४ हप्ता पहिले
वर्ल्डलिंककाे प्रायोजनमा रहेको फुटबल अब घरमा नै बसेर हेर्न पाइने २ महिना पहिले
इन्टरनेटको सुविधा नपुगेको गुर्जामा थ्री जीको जडान हुँदै २ महिना पहिले
अब काठमाडौं उपत्यकामा बार अनुसार पसल खोल्न पाइने १० मिनेट पहिले
चीनबाट अनुदानमा प्राप्त भएको भेरोसेल खोप २२६ पत्रकारले लगाए ११ मिनेट पहिले
आज थप २,४४२ जनामा कोरोना पुष्टि, ५१ संक्रमितको मृत्यु २० मिनेट पहिले
पर्सामा असार १३ गतेसम्म निषेधाज्ञा जारी राखिने २४ मिनेट पहिले
मेलम्ची बाढीः द्रुत आवश्यकता मूल्यांकन जरूरी २४ मिनेट पहिले
स्थानीय तथा व्यवसायीहरु सुरक्षित स्थानतर्फ सामान सार्दै २७ मिनेट पहिले
बाढीले पुरिएका सामान निकाल्दै स्थानीय र व्यवसायी ३० मिनेट पहिले
नबिल बैंकको स्वामित्वमा रहेको स्वावलम्बन लघुवित्तको शेयर बिक्रीमा ३४ मिनेट पहिले
बाढीले आफ्नो घर खेत बगाएको ठाउँ हेदै वृद्ध ३६ मिनेट पहिले
मेलम्ची–हेलम्बु जोड्ने मोटर बाटो निर्माण जारी ४३ मिनेट पहिले
नेपाल चेम्वर अफ कमर्सद्धारा बाढीपीडितहरुका लागि राहत सामाग्री हस्तान्तरण ४७ मिनेट पहिले
पिप्ले गलेश्वर बजार कटान र पहिरोको जोखिममा १ दिन पहिले
चितवनमा जेठ २० गतेसम्मका लागि निषेधाज्ञा थप ३ हप्ता पहिले
युनियन हाईड्रोपावरको शेयर खरिद माग उच्च २ हप्ता पहिले
हिमाली भेगमै यार्सा टिप्न गएका ७५ जना अलपत्र २ दिन पहिले
जुरीफुरीका तर्फबाट २५ परिवारलाई राहत १ हप्ता पहिले
पर्यटन बोर्ड प्रमुखमा तीन जनाको नाम सिफारिस १ वर्ष पहिले
बैशाखमा पाँचौ राष्ट्रिय र्‍याफ्टिङ च्यामिपयनसिप हुने ३ महिना पहिले
दरबार हत्याकाण्ड : सात समुन्द्र पारीको सहयोगमा भएकाे आरोप ६ महिना पहिले
कोरोना भाइरस : ३२३ जना भारतीयको उद्धार १ वर्ष पहिले